allsanaag.com - Caasimada Xaaraanta iyo Fusqiga
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3208	Days	05	Hours	33	Minutes	52	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Caasimada Xaaraanta iyo Fusqiga
Written by Shanle	Allsanaag: Hadii aad maqasho Muqdisho ayaa wax lagu kufsaday, lagu dilay, amaba waxbaa la bililiqeystay hala yaabin, maxaa yeelay dadkii burburiyay caasimada ayaa dhaqankaas uu kamid ahaa nolol maalmeedkooda tan iyo burburkii 1991gii. Muqdisho waa meelaha adduunka ugu horeesa kufsiga marka la eegayo cabirka kufsiga ee ka dhaca caasimadaha kale ee adduunka. Qof dumar ah oo la kufsaday awgeed, ayaa wariyihii sheegay warkana loo xiray, isagoo loo xiray maxaa u sheegtay warka. Warkan ayaa waxa uu gaaray meel walba oo adduunka kamid ah. Kufsiga ayaa ku badan magaalada Muqdisho, oo kuwa geesanayana ay yihiin kuwii la rabay dumarka iyo dadka tabarta yar iney badbaadiyaan.
Haday dawo bukootay maxaa kale oo wax dabiibi karaa. Mar hadii kuwii dharka ciidanka qabay ay wax dhacayaan, waxna kufsanayaan ayaa nabad galyada sugaya. Madaxweynaha DF ee Soomaaliya iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa laga rabaa in ay wax ka qabtaan, maadaama waxa kufsiga sameenaya ay yihiin dad ay isku beel ka soo jeedaan iyadoo dadka lagu sameenayaana ay yihiin dadka laga tirade badan yahay.
Gababada ayaa waxey tahay, Muqdisho oo ah xarrunta ay ka dhacaan waxyaabaha illaahay xarrimay oo dhan, hadii ay noqon laheed Dhac, Kufsi, Dil iyo ficilada kale aad iyagana u xun ee soo raaca kuwaas ayaa waxaa loo waayay dawo ku aadan arrinmahaas in lagu xaliyo, laakiin waxaa suurta gal ah in magaaladaas ay ka dhacdo masiibo illaahay oo lamid ah kuwii ka dhacay Indonesia iyo Japan iyo weliba meelo kale oo adduunka kamid ah, taasoo dawo u noqon karta waxa ka dhacaya magaaladaas.